MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA EE BULLMASTIFF IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Bullmastiff iyo Sawirro
'Kuwani waa Eygeena Bullmastiff, Izzy 11 bilood iyo Sonny 4 bilood. Waxay u muuqdaan kuwo adag laakiin waa waxyaabaha adduunka ugu macaan! Waxay jecel yihiin daawashada Cesar Millan iyo inay wax uun cunaan! '
sawirada eeyo yaryar oo dhasha
Bullmastiff waa mid baaxad weyn, aadna u dhisan, laakiin ma aha eey dhib badan. Masawirka weyn, ee ballaadhan ayaa duuduubmay, afkuna waa ballaadhan yahay, qoto dheer yahay oo badiyaa midabkiisu mugdi yahay. Foodda hore waa fidsan tahay joogsaduna waa dhexdhexaad. Sanka madoobaa waa mid ballaaran oo wuxuu leeyahay dulal diiran. Ilkaha waxay ku kulmaan heer ama qaniinyo hoose. Indhaha dhexdhexaadka ahi waa haad madow. Dhegaha V-qaabeeya ayaa loo dejiyaa meel sare oo ballaadhan, oo loo qaado meel u dhow dhabannada, taas oo u leh muuqaal afar gees ah madaxa. Dabada adag ayaa sare loo dhigay, oo ka sii dhumuc weyn xididkeeda oo taabanaya waana mid toosan ama qalloocan, waxayna gaaraysaa hocks. Dhabarka ayaa gaaban, toosan oo siman inta u engegaya iyo sinta dambe. Koodhka gaaban, cufan, waxoogaa qallafsan ayaa ku soo dhaca birimmo, fawn, ama casaan, oo badanaa leh calaamado madow oo madaxa ah.
Bullmastiff waa eey heegan ah, feejignaan leh, oo leh dabeecad dabeecad wanaagsan. Naxariis iyo kalgacal, laakiin aan cabsi lahayn haddii laga xanaajiyo. In kasta oo aysan u badnayn in la weeraro, haddana waxay qaadi doontaa a ku soo xadgudbay , hoos u dhig oo xaji. Isla mar ahaantaana, waa u dulqaadashada carruurta. Caqli badan, xitaa dabacsan, deggan oo daacad ah, eeyahaani way jecelyihiin hoggaaminta aadanaha . Bullmastiff waa mid aad u awood badan wuxuuna u baahan yahay a sayid adag yaa ku kalsoon oo la jaan qaada xeerarka dul saaray eeyga. Waa inay si fiican u noqdaan addeecid loo tababaray , waana in la baraa inaadan xarigga jiidan. Markay galayaan ama ka baxayaan albaabada ama albaabbada eygu waa inuu u oggolaadaa bani'aadamku inay soo galaan oo ay ka baxaan marka hore xushmadda baakadka, maxaa yeelay maskaxda eyga, hoggaamiyaha ayaa ugu horreeya. Eygu waa inuu ciribta xagga aadanaha ama gadaashiisa . Tani waa tan ugu muhiimsan, maadaama aysan eeyuhu kaliya lahayn dareen tahriib oo ay u baahan yihiin inay maalin walba socdaan, laakiin dareenku wuxuu u sheegaa eyga hogaamiyaha xirmada ayaa marka hore taga. Hubso inaad si ballaadhan ula dhaqanto dadka iyo eeyaha kaleba da 'yar. Way ku fiicnaan karaan xayawaanka kale , iyadoo kuxiran sida wanaagsan ee milkiilayaashu ula xiriiraan eeyga. Bullmastiff waa nooc ka xoog badan kan Mastiff . Wuxuu u janjeeraa duurxul , caajis iyo khuuro. Eydu waxay u muuqan karaan kuwo isku-dubbaridan. Eeyadan ayaa ah kuwo aad ugu nugul dhawaqa codkaaga waxayna u baahan yihiin qof kula hadla hawo kalsooni leh, laakiin aan qalafsanaan lahayn. Maaha eey adag laakiin wuxuu ubaahan yahay ilaaliye awood sheegan kara awoodiisa. Bullmastiff marna waa inaan lagu masaafurin qol. Milkiilayaasha ama kuwa iska aamusan ayaa ku adkaan doonta inay xakameeyaan eeygan. Waxay u muuqan doontaa mid ula kac ah, oo suurtagal ah inay dagaal kula gasho eeyaha kale oo lagu habeeyo shisheeyaha haddii milkiilayaashu aysan waqti siinin is dhexgal , oo ogaadaa sida saxda ah ee loola wadaago waxa laga filayo si macno leh.
Miisaanka: Ragga 110 - 133 rodol (50 - 60 kg) Dumarka 100 - 120 rodol (45 - 54 kg)
U janjeera kansarka , dysplasia sinta, burooyinka, dhibaatooyinka indhaha, PRA iyo bushimaha ku karkaraya. Sidoo kale u nugul ubax . Waa fikrad fiican in la quudiyo laba ama saddex cunto oo yaryar maalintii halkii laga siin lahaa hal cunto weyn. Miisaan buu ku fududaa, haku badin quudinta. U janjeera burooyinka unugyada .
Maamulayaasha dibi cagajuglaynta waxay ku fiicnaan doonaan aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Iyagu gudaha waxoogaa kama hawl galaan oo deyr yar ayaa qaban doona. Uma dulqaadan karaan heerkulka xad dhaafka ah.
Bullmastiffs waxay u baahan yihiin in lagu qaado a socod maalinle ah si ay u gutaan dareenkooda asalka ah ee ah inay haajiraan. Shakhsiyaadka aan helin baahidaan la daboolay waxay u badan tahay inay qabaan arrimaha dhaqanka . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Bar iyaga inay galaan oo ka baxaan dhammaan albaabbada iyo iridda ka dambeysa aadanaha.
10 sano ka yar.
4 - 13 eeyo yaryar, isku celcelis 8
Jaakad gaagaaban oo waxyar adag ayaa fududahay in la xanaaneeyo. Shanlo oo ku caday burush adag, shaambo oo keliya markii loo baahdo. Wax yar ayaa ku daadanaya noocyadan. Cagaha si joogto ah u hubi maxaa yeelay waxay qaadaan culeysyo badan, ciddiyahana iska jar.
Bullmastiff waxaa lagu helay iyadoo laga talaabayo 60% Mastiffs oo leh 40% Bulldogs gudaha wadanka Ingriiska. Noocyada 'Mastiff Bulldog' waxaa laga heli karaa diiwaanka dib ugu laabo 1795. 1924 Bullmastiffs wuxuu bilaabay in la xukumo. Saddex jiil oo taranka Bullmastiffs ayaa looga baahnaa Bullmastiffs in loo diiwaangeliyo inay yihiin saafi ahaan. Bullmastiff waxaa loo adeegsaday inuu yahay eeyga ciyaarta si uu ula socdo, ula macaamilo ugana qabto ugaarsadayaasha. Eeyaha waxay ahaayeen kuwo kulul oo hanjabaad leh, laakiin waxaa loo tababaray inaysan qaniinin kuwa ku soo xadgudbay. Markii baahida loo qabo eeyaha ciyaarta ilaaliya ay yaraadeen, eeyaha birimageydka madow ee aadka ugu fiican is-beddelka habeenkii waxay u oggolaadeen caan ka noqoshada midabka fudud ee faanka. Waxaa lagu qiimeeyay inay tahay ilaaliyaha ugaadhsiga, kaalmada xagga ciidanka iyo shaqada bilayska, waxaana loo adeegsadaa inay ilaalo u ahaato Jaamicadda Dheemanka ee Koonfur Afrika. Bullmastiff-ka maanta waa wehel qoys lagu kalsoonaan karo iyo ilaaliye. Waxay ku raaxeysataa la noolaanshaha qoyska, oo ay si fiican naftiisa ugu raaxeyso.
Odin eey Bullmastiff ah oo jirta 12 toddobaad oo miisaankiisu yahay 35 rodol. 'Odin wuxuu jecel yahay quraacda, qadada iyo cashada, wuxuuna si gaar ah u jecelyahay safarada si uu u arko ardayda kale ee fasalada adeeca.'
Odin eey Bullmastiff ah oo jirta 12 toddobaad oo miisaankiisu yahay 35 rodol.
Higgins the Bullmastiff markuu 7 bilood jiray— 'Higgins waa 7 bilood jir iyo 85 lbs sawirkaan. Isagu waa eey debecsan oo caqli badan laakiin xoogaa madax adag. Xoog leh oo feejigan, laakiin xishood leh shisheeyaha. Waan akhriyay oo waxaan arkay waxyaabo badan oo tababar ah oo uu ka mid yahay Cesar Millan. Marka tababarka, waxaan ahay sida adag sida uu u baahan yahay oo u siiya jawaab celin badan oo wanaagsan . '
Shirley, waa Bullmastiff ka tirsan Circle J Bullmastiffs, waa 1½ sano jir iyo 105 rodol.
Brutus the Bullmastiff oo qiyaastii 2 jir ah— 'Brutus waa nin Bullmastiff ah. Isagu waa mid geesi ah, geesi ah, jilicsan, la jecel yahay oo daacad ah. '
Rambo Bullmastiff oo ah 1 sano jir
Charlie, oo ah 16-bilood jir brindle Bullmastiff pup
'Lacee waa kow iyo toban toddobaad Bullmastiff. Waxay leedahay dabeecad adeeg leh jacayl badan oo ay bixiso. In kasta oo maalmaheeda yar yar ay inta badan ka kooban tahay hurdo haddana waxay leedahay murugo badan oo gaagaaban. '
liiska dhammaan eeyaha eyda az
Eeg tusaalooyin badan oo Bullmastiff ah
Sawirada Bullmastiff 1
Sawirada Bullmastiff 2
Sawirada Bullmastiff 3
Sawirada Bullmastiff 4
Sawirada Bullmastiff 5
waxa ey ey dhalaan afaf madow
jack russell xadka collie mix
ceel dibi qasac leh